Forum serasera malagasy Rétine mivadika ? - Dinika forum.serasera.org
Rétine mivadika ?
Fitohizan'ny hafatra : Rétine mivadika ?
Nehemiah - 07/08/2013 17:08
Maro ny milaza fa mivadika ny fipetraky ny fifandraisan'ny rétine @ fitatitra. Izay no entiny antitranterina fa tsy nisy Mpamorona namorona azy satria raha nisy Mpamorona namorona ny rétine dia tokony napetrany tsara ny fitatitra mifandray @ rétine.
Kanefa tsy mitombina izany filazana izany ! Ny an'ny orita izao dia tsy mivadika ny fipetraky ny fifandraisan'ny rétine-ny @ fitatiny, kanefa ratsiratsy fahitàna izy raha ampitahaina @tsika olombelona.
Nasehon'ilay mpahairafimaso Dr Peter Gurney fa misy antony mitombina ny fipetraky ny fifandraisan'ny rétine @ fitatitra @ olomelona. Ny antony tena misongandina dia ny ahafahan'ny sela mandray fahazavàna hifampikasika @ taova 2 manokana ambadiky ny rétine izay ilaina mba hamerina ny sela mandray fahazavàna @ laoniny rehefa avy nandray hazavàna be ary mba hitroka ny hafanàna tafahoatra. Kanefa samy maizina ireo taova 2 ireo.
Ka raha tsy toy izao ny fipetraky ny fifandraisan'ny rétine @ fitatira dia manjary takona ny fahitantsika ka tsy mahita inona na inona. Sady mitovy @ antsika ny fipetraky ny fifandraisan'ny rétine @ fitatitra eo @ voromahery, ary malaza ho marani-pijery ny voromahery .
Angamba fantatr'Andriamanitra Andriananahary tsara hatr@ voalohany ny nataony t@ izy namorona ny masontsika .